admin | Warmaalnews.com
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow magacaabay Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka sida, iyadoo si buuxda Taliyaha NISA loogu magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo muddo 10 bilood ahaa Sii Haye. Sidoo kale Golaha Wasiirada ayaa Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka u magacaabay Jen. Odawaa Yuusuf Raagge, iyadoo xilkaas laga qaaday Jen. Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe. Taliyaha Booliska ayaa loo magacaabay Cabdi ...
Saddex Dal Oo Isku Baheystay Inuusan Soo Laaban Madaxweyne Axmed Madoobep
Hargeysa (warmaal news):- Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa warbixin dheer ka qoray arrimaha Jubbaland, gaar ahaan doorashada madaxweynaha maamulkaasi oo dhaceysa Khamiista soo socota. Wargeyska ayaa shaaciyey in dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay sameysteen isbahaysiga dadka Kosheetigga ah, islamarkaana ay doonayaan inay beddelaan Axmed Madoobe oo sanadkan la kulmaya cadaadis ...
Xog: Saadaq John oo xiray afar taliye oo baabuur ka soo daayey baro kontorol
Muqdisho (warmaal news) – Taliyaha qaybta gobalka Banaadir ee booliiska Soomaaliya Saadaq Cumar Xasan “Saadaq John” ayaa habeen hore xiray 4 taliye oo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo ciidankii la shaqeynayay, sida ay ogaatay Caasimada Online. Taliyaasha la xiray ayaa madax ka ahaa 4 kontarool oo ku yaala magaalada Muqdisho, islamarkaana ka tirsan aagga lama soo dhaafaanka ah ee Muqdisho. Sidoo ...
Baadiyow oo ku gacan seeray dalabkii beelaha Habargidir
Dhuusamareeb (warmaal news) – Guddoomiyaha guddiga qaban qaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug Cabdiraxmaan Cabdullaahi (Baadiyow) oo la hadlay warbaahinta ayaa ku gacan seeray baaqii odayaasha dhaqanka dhaqanka beelaha Habargidir ee ku aadanaa in dib loo dhigo shirkaasi. Baadiyow ayaa sheegay in fursad hore ay siiyeen beelaha Habargidir, islamarkaana ay qabsadeen illaa 15-ka bishan, waqtigiina uu dhammaanday. Sidoo kale wuxuu tilmaamay ...
Wasiir Sacad Oo Doonaya In Xildhibaan Wakiillada Ka Tirsan La Anshax Mariyo
Ciidamada Xoogga oo jab culus gaarsiiyey Shabaab iyo xogta dagaalka Awdheegle
Awdheegle (warmaal news) – Mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo ay galaan ciidamada Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada Awdheegle gobalka Shabeellada Hoose, waxaana la sheegayaa in uu khaasaare badan ka soo gaaray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa muddo isku abaabulayay baadiyaha degaanka Xawaadley ee gobalka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waxaana la sheegay in shalay iyo ilaa xalay ay halkaasi ...